Marika Twitter Faux Pas | Martech Zone
Marika Twitter Faux Pas
Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Alahady, Aogositra 2, 2015 Adam Small
Misy ity tovolahy iray ity ao amin'ny Twitter izay tsy manara-dia ahy ary manara-dia ahy toa ny isan-kerinandro. Mino aho fa mino izy fa hanaraka azy tampoka aho (satria mbola tsy nandramako in-27 farany izy.). Tsy maintsy eritreretiny fa namboariko ho azy ny kaontiko na ondry iray hikitika aho manaraka amin'izay manaraka ahy.
Tsy nanaraka azy niverina aho tamin'ny voalohany satria nijery ny fizotrany aho ary tsy nahita na inona na inona misy lanjany mivantana amiko. Tsy hoe nilaza zavatra ratsy izy na nanosika pôrnôgrafia. Tsy liana amin'ilay vokatra tadiaviny fotsiny aho, tsy eo amin'ny sahaniko izy, tsy miteny na inona na inona hitako fa mahaliana ahy lavitra izy, ary tsy eo an-toerana izy - ny masonkarena rehetra ampiasako mba hanapahana hevitra raha hanaraka aho olona sa tsia. (Tsy mila mahafeno ny masonkarena rehetra ianao; iray fotsiny.)
Tsy manana ny laharana fanarahana be maniry aho, fa ahoana? Tsy mila nomerao be fotsiny aho satria mahafinaritra. Na izany na tsy izany dia tsy niraharaha ilay rangahy fotsiny aho hatreto. Amin'ny fandaharam-potoana iray manontolo dia fahasosorana kely fotsiny toa an'io moka iray niseho tao amin'ny barbeque io. Fa izany no izy - manomboka mahita an'io lehilahy io ho moka aho.
Raha ny tena izy dia izy manimba ny marika nataony miaraka amin'ny olona iray izay toa mitady hamandrika tokoa izy. Raha tamin'ny voalohany dia hitako izy ho toy ny mpandraharaha ara-dalàna miaraka amina vokatra mendrika izay tsy nahaliana ahy fotsiny, ankehitriny dia hitako izy ho toy ny fotaka mpiremby izay tsy hanolorako fanahy mihitsy.
Ankehitriny rehefa nihorakoraka aho dia avelao aho hametraka fanontaniana aminao, ry mpamaky malala. Raha tapa-kevitra ny hampiasa ny Twitter ho toy ny tetika fananganana marika ianao, inona ireo fihetsika inoanao fa mety hanimba ny marikao?
Fanavaozana: Alohan'ny nanararaotako namoaka ity lahatsoratra ity dia tsy maintsy efa nahita ireo sioka nataoko momba azy ny mpampiasa Twitter resahina. Nosakanany me. Mahafinaritra ahy fotsiny.
Tags: fihetsika ratsy ao amin'ny twitterlesoka twittertwitter araholesoka twitter
Lesona dimy sy tsiambaratelo lehibe iray amin'ny famahanana bilaogy haingana kokoa
Fanjonoana ao anaty farihy an-tapitrisany